IMEX America bụ mmemme mba ụwa izizi mepere ka ebuli mmachibido njem US
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ » IMEX America bụ mmemme mba ụwa izizi mepere ka ebuli mmachibido njem US
Airlines • Airport • Akụkọ mkpakọrịta • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • nzukọ • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
IMEX America bụ mmemme mba ụwa izizi mepere ka ebuli mmachibido iwu njem US.
N'ihe na-erughị izu abụọ ka ọ ga-aga ruo IMEX America, ọtụtụ narị ndị na-azụ ahịa zuru ụwa ọnụ, ndị ngosi na ndị ọkachamara ụlọ ọrụ ekwenyela ugbu a na ha bịara.
Ihe karịrị ndị ahịa 3,000 zuru ụwa ọnụ ka edebanyere aha ịga IMEX America.
Ihe karịrị ụlọ ọrụ ngosi 2,200, sitere na ebe a na-aga, ebe egwuregwu, otu ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ndị na-eweta teknụzụ.
Ịbịa ụlọ maka ụlọ ọrụ ahụ bụ ihe mgbakwunye maka ememe na mmemme mgbede gụnyere Site Nite na-eme na World Resorts, MPI Foundation mbinye aka Rendezvous omume na Drais na EIC Hall of Leaders na MGM Grand.
"IMEX America bụ mmemme mba ụwa izizi mepere ozugbo mmachibido iwu njem US na Nọvemba 8, yana site n'ịchịkọta nnukwu ngalaba nke mmemme azụmaahịa zuru ụwa ọnụ na US na ihe ngosi ahụ, anyị nwere olile anya imeghe ụzọ maka mmụgharị mpaghara na mgbake." Carina Bauer na-ele anya IMEX America, na-eme na November 9 - 11 na Las Vegas.
Naanị ihe na-erughị izu abụọ ga-aga IMEX America, ọtụtụ narị ndị ọzọ zuru ụwa ọnụ zụrụ, ngosi na ụlọ ọrụ ọkachamara ugbu a kwadoro ha bịara.
Ihe karịrị ndị na-azụ ahịa zuru ụwa ọnụ 3,000 edebanyere aha ịga.
Ahịrị ihe ngosi gbasaara
Nkwupụta njem US na nso nso a emeela ka ọnụnọ Europe sie ike na ihe ngosi sitere na ndị ngosi gụnyere Holland, Ireland, Italy, Scotland, Scandinavia na Spain. Ihe ngosi a na-ekpuchi akụkụ anọ nke ụwa na Australia, Korea, Japan, New Zealand na Singapore n'etiti mba Asia-Pacific, yana ndị ọzọ dị arọ zuru ụwa ọnụ gụnyere Dubai, Morocco na South Africa. Ha na-esonye na US, Canada na Latin America iji mepụta n'ezie mba ụwa. Ebe ndị a zuru ụwa ọnụ na-ewu ewu, yana ọtụtụ usoro ihe ngosi na-ejuputa ngwa ngwa obere oge ka akwụkwọ akụkọ gachara.
Mpaghara Tech Hub nke ụlọ ihe ngosi ahụ bụ otu n'ime ihe kachasị ukwuu, na-egosipụta ọtụtụ ụlọ ọrụ teknụzụ ma na-egosipụta ngwa ngwa mpaghara ahụ siri malite n'ime afọ ole na ole gara aga. Ụlọ ọrụ gụnyere Aventri, Bravura Teknụzụ, Cvent, EventsAir, Fielddrive BV, Hopin, MeetingPlay, RainFocus na Swapcard.
Ụzọ na-aga Mandalay Bay
A na-akwụ ụgwọ dị ka 'ịbịarute ụlọ maka ụlọ ọrụ', ihe ngosi nke afọ a ka atọrọ ka ọ bụrụ nnọkọ pụrụ iche: ọ bụghị naanị na ọ bụ mbipụta nke iri. IMEX America, ihe ngosi nwekwara ụlọ ọhụrụ - Ọdụ ụgbọ mmiri Mandalay. Ịme atụmatụ ihe ngosi n'ebe ọhụrụ a enyela ndị otu IMEX ohere ileba anya n'ichepụta ihe ngosi ahụ wee webata ụfọdụ atụmatụ pụrụ iche nke na-eji nnukwu ego. Ọdụ ụgbọ mmiri Mandalay's mmasị na welie ndị bịaranụ ahụmahụ. Otu n'ime ihe ndị a bụ 'Relaxation Reef, nke ga-akwado mmemme maka ọdịmma na ebe a na-eme egwuregwu Shark Reef Aquarium, ebe ebe ihe karịrị anụ mmiri 2,000 nwere. Ụfọdụ oge mmụta n'efu na ihe nkiri a ga-ewerekwa ọnọdụ na oghere dị n'èzí Mandalay Bay.
Ọmụmụ ahaziri maka ngalaba niile
Ihe na-akpali akpali, mmemme mmụta n'efu na-aga n'ihu na ihe ngosi ahụ agaghị echefu ya, wee malite na Smart Monday, nke MPI kwadoro, na-eme na 8 Nọvemba, ụbọchị gara aga. IMEX America amalite. Dr Shimi Kang sitere na Mahadum British Columbia ga-ewepụta isi okwu Smart Monday, na-egosipụta usoro nyocha kachasị ọhụrụ maka ime mgbanwe, ihe ọhụrụ, imekọ ihe ọnụ na ọganihu azụmahịa na-adịgide adịgide.
Oge raara onwe ya nye maka otu ụlọ ọrụ dị iche iche na-enye ndị bịaranụ ohere ịhazi ahụmịhe Smart Monday ha. Enwere agụmakwụkwọ na ịkparịta ụka n'Ịntanet naanị maka ndị isi ụlọ ọrụ na Nzukọ Mgbakọ Executive - emebere maka ndị isi ụlọ ọrụ dị elu sitere na ụlọ ọrụ Fortune 2000 - yana ụlọ ọrụ ọhụrụ - mepere emepe ndị niile na-eme atụmatụ sitere na ụlọ ọrụ na ọkwa niile. Ndị isi otu nwere ike jikọọ ma soro ndị ọgbọ ha mụta ihe na Association Leadership Forum, nke ASAE mepụtara.
Ụbọchị ọ bụla na-amalite site na isi okwu MPI. Ndị na-ebugharị na ndị na-ama jijiji site na mpụga ụlọ ọrụ ihe omume azụmahịa ga-eme ka onye ọ bụla weta echiche ụwa pụrụ iche na ihe ngosi ahụ gụnyere onye nchoputa nke ịgba egwu na obodo zuru ụwa ọnụ.
The Inspiration Hub bụ ọzọ n'ụlọ na-egosi n'ala mmụta, na-anapụta a juru n'ọnụ oge nke mmụta ohere na-agwa azụmahịa mkpa na skillset chọrọ nke na-akọwa mbubreyo 2021. Sessions cover Creativity na nkwurịta okwu; Ụdị dị iche iche na nnweta; Ihe ọhụrụ na teknụzụ; Mgbake azụmahịa, mkparita uka nkwekọrịta, akara nkeonwe na nkwado.
Mee mmemme ọbịbịa ụlọ ọrụ ahụ
Ọ bụ ezie na ala ihe ngosi bụ ebe azụmahịa na mmụta, ahụmahụ IMEX America na-aga n'ihu n'ofe Las Vegas. Njem nlegharị anya na-eme ka obodo ahụ dị ala ma ọ bụ nri kacha mma, ahụmahụ omimi ma ọ bụ egwu dị n'ime na ebe ngosi ngosi abụọ: Caesar's Palace na Mandalay Bay. Ọbịbịa ụlọ maka ụlọ ọrụ ahụ bụ ihe mgbakwunye maka ememe na mmemme mgbede gụnyere Site Nite na-eme na World Resorts ọhụrụ, mbinye aka MPI Foundation Rendezvous emume na Drais na EIC Hall of Leaders na MGM Grand.
IMEX America na-ewere ọnọdụ 9 – 11 Nọvemba na Mandalay Bay na Las Vegas na Smart Monday, nke MPI kwadoro, na 8 Nọvemba.